चीनले समुद्रको सबैभन्दा गहिराइमा मानवसहितको पनडुबी पठाएको छ
चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले मानव सहितको पनडुबी शुक्रबार पृथ्वीकै सबैभन्दा गहिराइमा रोकिराखेको भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । चिनियाँ सरकारी मिडियाका अनुसार उक्त ‘फेन्डुझे’ डुंगा तीन जना अनुसन्धानकर्ता टोली सहित १० हजार मिटर गहिराइसम्म पुगेको थियो ।
सीसीटिभीले सार्वजनिक गरेको भिडियो अनुसार समुद्रको गहिराइभित्र क्यामेराले हरियो र सेतो रंगको पनडुबी अँध्यारो पानीको सतह हुँदै बाक्लो लेदोतर्फ लम्किरहेको देखाएको छ । यसै महिनाको सुरुमा मानव सहित १० हजार ९ सय ९ मिटर समुद्री गहिराइसम्म पुगेर फेन्डुझेले विश्व रेकर्ड कायम गरेको हो ।
उक्त पन्डुबीलाई समुद्र भित्रका जैवीक नमुना संकलनका लागि वरपरका वस्तुको ध्वनी पहिचान गर्नसक्ने गरी रोबोटिक हतियार समेत जडान गरिएको छ । पन्डुबीबाट त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजाति र समुद्र भित्र छरिएर रहेका जीवीत वस्तुको अवलोकन पनि गरिने बताइएको छ । र अनुसन्धानकर्ताहरुले आफ्नो कामका लागि विभिन्न नमुना संकलन गर्नेछन् । ‘चाइनीज एकेडेमी अफ साइन्सेज’का अनुसान्धाता झु मिनका अनुसार उनीहरु यस अनुसन्धानमा वास्तविक रुपमा सफल हुनुअघि दुईवटा परीक्षण गर्नेछन् ।
प्रचण्डले बर्ग संघर्ष र समृद्धिको कुरा गर्नुभनेको चार्ल्स शोभराजले बुद्धको उपदेश सुनाए जस्तै हो 37 views
विद्यार्थी सहुलियत कार्यनयनका लागि अनेरास्ववियु काभ्रेद्वारा ज्ञापनपत्र पेस। 15 views
“यात्राका इन्द्रेणी रंग” बिमोचन, नियात्रा साहित्यमा नयाँ कोसेली !3views
चेतना मा.बिको नेतृत्वमा युवा नेता अमित लामा ! दोब्बर मतले निर्वाचित ।2views